नेपाली भाषा बुझ्ने हात्तीे ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more नेपाली भाषा बुझ्ने हात्तीे !
जेठ ६ गते, २०७५ - १७:४०
चितवन । हात्तीसारका माहुत विनोद चौधरीले त्रित… सिटी बजाए । लक्ष्मण थुचुक्क बस्यो । अर्को सिटीमा सुत्यो, अर्को सिटीमा कोल्टे पर्‍यो । चौथो सिटीमा पेट उचालेर घुँडा टेकेर बस्यो । यसरी बस्दा हौदा कस्न सजिलो हुन्छ ।
निकुञ्जका सूचना अधिकारी नुरेन्द्र अर्याल भन्छन्, “कर्मचारीहरुले आन्तरिक रुपमा के सम्म गर्दोरहेछ भनेर सिकाएका रहेछन्, माला लगाउने, आर्शिवाद दिने गरिरहेको छ ।” रासस
जेठ ६ गते, २०७५ - १७:४० मा प्रकाशित